China 800KW Solid state high frequency welder - hunyambiri basa Pipe yekutengesa muchina seti fekitori uye vagadziri | Mingshuo
Kugadzira Nhanganyaya yekubata / Induction yekumisikidza muchina
Iyo solid-state yakakwira frequency frequency welding muchina inoshandisa iyo yeGerman IXYS kambani IXFN38N100Q2 38A / 1000V yakakwira-simba MOSFET uye DSEI 2 × 61-12B 60A / 1200V inokurumidza kupora diode yekuumba yakateedzana inverter wedunhu. Iyo inverter chishandiso yakaiswa mune bhaudhi crimping nzira, iyo yakasiyana nemhando yakafanana. Iyo wedunhu bhodhi yekutenderera nzira yeiyo inverter chishandiso cheyakaomesesa-mamiriro epamusoro-frequency waya yekutengesa muchina.
Kugadzira Paramende (kudoma) kweiyo 800kw Simbi Fenicha Pipe Kugadzira Chirimwa pombi inogadzira michina chubhu inogadzira muchina
Pipe zvinhu kabhoni simbi / aruminiyamu simbi / isina simbi / ERW / kwakakurudzira / Iron / mhangura simbi
Pipe chimiro Round, Square, Rectangular, H-chimiro, yakakosha chimiro
Simba rekubuda 800kw
Kuyera Izvozvi 2000A
Dhizaini Dhizaini 150 ~ 250kHz
Yakakurudzira huwandu hwepombi dzinogona kusungwa ne800kw HF SOLID STATE PIPE WELDER
Pipe dhayamita 114-273 mm
Pipe rusvingo ukobvu 4.0-10.0mm
Welding Mode Kubata / mhando mbiri ye High Frequency Solid State Welding Machine
Kutonhora Mode Shandisa Mvura-Mvura inotonhorera system kutonhorera induction mhando 800kw solid state yakakwira frequency frequency welder
Welding yesimbi chubhu, isina simbi chubhu, aruminiyamu chubhu, mhangura chubhu, H-danda uye yakakosha chikamu chubhu.
Basa Rekuumbwa kweiyo yakasarudzika yekumonera ruoko yakakwira frequency yakasimba nyika welder
Solid state yakakwira frequency frequency welder inonyanya kushandiswa kune yakakwira frequency yakatwasuka musono chubhu chigayo mutsara. Iyo yakakwira frequency frequency magetsi inotora AC-DC-AC frequency-inoshanduka chimiro. Iyo inogadzirisa inotora 3-chikamu 6-kupomba thyristor kugadzirisa, IGBT DC kutema kana 3-chikamu 12-kupomba thyristor kugadzirisa. Inverter inotora yakakwira voltage yakakura simba simba MOSFET kuti izere izere bhiriji resonant inverter. Inverter kuburitsa inotora yakanyanya kushanda ferrite inoenderana transformer kuti iite simba synthesis, impedance inoenderana uye yemagetsi kusarudzika. Resonant tank redunhu inotora yechipiri mativi akateedzana resonance.
Iyo yese seti michina inoumbwa ne switch giya inogadzirisa kabhodhi, inverter kuburitsa cabinet, kutenderera yakapfava mvura kutonhora system, koni uye yekumisikidza tafura.
Pashure: 600KW Series yekubatanidza Solid state yakakwira frequency welder China MOSFET otomatiki solid state hf induction kupisa welder
Zvadaro: 200KW Stainless Simbi chubhu chigayo Impeder yeiyo Yakakwira Frequency Induction Welding Chishandiso
100KW Series yekubatanidza mhando IGBT Yakabatanidzwa Saka ...